Injani Le Kuhle Stores Vintage EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Injani Le Kuhle Stores Vintage EYurophu
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/09/2020)
Lapho befuna okungcono izitolo vintage eYurophu, ungenaso kuphela afuna kwalezo zinxenye ezingaphelelwa isikhathi. Ungene futhi ukuthatha uhambo phansi Memory Lane futhi ukuhlola umlando. A esitolo vintage lifana semfashini Museum, eyabonisa isiko a dolobha nomlando walo. Siyathanda ukuhlola emadolobheni entsha nejabulisayo ngesitimela, futhi ekutholeni esiyingqayizivele futhi izingubo ezingaphelelwa isikhathi ngenye indlela fun yokwenza ke. Nazi Kuhle ezitolo Vintage eYurophu nase kanjani lapho ngo-zemininingwane.
Kuhle ezitolo Vintage eYurophu Paris: Mahhala P Star
Njengoba lesibili dolobha wavakashela amazwe amaningi aseYurophu, Paris ixhunywe kahle kakhulu futhi kufinyeleleke. Abavakashi ungathola eParis kalula ngesitimela emazweni amaningi angomakhelwane ezifana Belgium, Spain, Holland, UK, Germany, phakathi kwabanye usebenzisa SaveATrain.
Uma uke selehla isitimela, ukuma kuzoba Okutholakalayo P Star. Uma, njengathi, uku umthandi zonke izinto Retro, ke akukho jaunt enhlokodolobha fashion Europe kuzokuphela ngaphandle ukumisa kunezinxushunxushu ngokumangalisayo Mahhala P Star. Ngokungafani nezinye izitolo vintage Paris, FREE'P'STAR akusho nje adayise French lesibili ngesandla izingubo. Badayisa izingubo lesibili ngesandla wase-United States kakhulu futhi ngezinye izikhathi ngisho okudaliwe omusha owenziwe zimpahla. Kukhona uhla enkulu kakhulu ngokuncintisana ontengo yakhe yayinqunyiwe izingubo amagilebhisi izesekeli kusukela 70s’ kuya ekhulwini lama-21.
Echichima anezikhala amagugu vintage kwabesilisa nabesifazane, esitolo is ultimate go-to kwe sobudala lesibili ngesandla abathengi abazimisele umba ujule ukuze uthole uyathola yabo imfashini.
I-Dijon ithikithi lesitimela laseParis
Ibuyela ithikithi lesitimela laseParis
ILille ithikithi lesitimela laseParis
Uvakashela ithikithi lesitimela laseParis
Kuhle ezitolo Vintage Berlin: Hubelani Blackbird
Ungakwazi ukufinyelela Berlin kusukela kuzo zonke izikhombisi ngokusebenzisa InterCityExpress okusheshayo, kwamadolobha, EuroCity, futhi InterRegio Izitimela. Entsha esiteshini central Berlin Hauptbahnhof enhliziyweni Berlin kwavulwa 2006 kanye nomqondo omusha nojantshi neziteshi Berlin wamiswa. Zonke zezitimela kahle exhunywe kwi Indlela yokuhamba ngezinto zomphakathi, ngakho ekwenzeni indlela yakho kukhona super lula, futhi ezingabizi uma usebenzisa i-Londoloza Isitimela Yiqiniso.
Nakuba Paris kungenzeka ingenye yezindawo avakashelwa eYurophu, sicabanga Berlin iwukuba ezinye swankiest emgwaqweni isitayela eYurophu ikhaya. Ngakho akumangalisi-ke, ukuthi Berlin is echichima ezinye Kuhle ezitolo Vintage eYurophu. Esinye sezisho yethu siqu nokuba Hubelani Blackbird. Akhiwe wesifunda Arty ka Neukolln itheku lesibili ngesandla ihlanganisa iqoqo yayo eclectic of isembatho vintage nge cafe ngokukhethekile ukudla vegan. Sinomuzwa lokhu ulunika onqenqemeni yangempela futhi yisizathu esinamandla nakakhulu sokuhlala esitolo, udle! It has a utalagu umklami izicucu kusukela 70s’ kuya 90s’ kanye esihlwabusayo ngezandla awukudla, Hubelani Blackbird a winner kubo bonke ozinikezele Foodie!
AbakwaBremen eziya e-Berlin ithikithi lesitimela
ILeipzig ithikithi lesitimela laseBerlin
Ukuhamba ngethikithi lesitimela saseBerlin
IHamburg iya eBerlin ithikithi lesitimela
Kuhle ezitolo Vintage e-Amsterdam: uziphu
Ungakhohliswa ngu ngamawala. Lokhu esitolo ubukeka amancane avela ngaphandle, kodwa uma uhamba nge iminyango, uzokwenza nakho magic ngokushesha. Uzothola enye yezindawo ezinkulu kakhulu lesibili ngesandla izitolo Amsterdam obonisa emabhilidini amabili cavernous baminyana egcwele izingubo vintage, ahlukaniswe ezingeni mezzanine anikezelwe izesekeli.
Isitolo restocks njalo futhi ligcina izinto iyintsha futhi iyintsha. Yize Ukukhetha yayo ihamba ne kungasaziwa-no-ukugeleza imfashini wesimanje, uziphu uyazigcina emashalofini yayo yafakwa siluhlaza izinto ezifana nama-jeans, jackets ibutho, namahembe ayi-flannel.
Kuhle ezitolo Vintage Barcelona: futhi Swing
Umelani ngaphandle njengoba inhlokodolobha yamasiko Catalonia, Barcelona ine avant-garde nokuzwakala okwamanje onekhono. Ukunikela izakhiwo zesimanje, izakhiwo medieval, cuisine okudala, futhi kuyachwaza nightlife. Barcelona ingenye phezulu travel izindawo European. Futhi njengoba siya ku Summer, kumayelana ukuze uthole super umatasa. Ngakho qiniseka ukuthi ukubhuka amathikithi akho isitimela Ekuqaleni SaveATrain. Akukhona nje kuphela ukuthi amanye Barcelona ikhaya Kuhle ezitolo Vintage eYurophu, kodwa kuphinde omunye Summer ethandwa kakhulu iholide izindawo. Phakathi bedla okumnandi tapas futhi ukushuka kwenye eziningi amabhishi, zinike isikhathi ukuvakashela futhi Swing. Lokhu Boutique langa vintage Itholakala nemfashini endaweni Born. Egcwele ngesandla akhethiwe umklami izingubo, izikhwama, ubucwebe kanye nezicathulo, lesi sitolo snazzy Izitokhi izingubo vintage kusuka zonke eyishumi kwekhulu lama-20.
Uma okunethezeka into yakho, ke uze endaweni efanele. futhi Swing izici izingcezu Retro kusuka Chanel, Yves Saint Laurent, futhi Christian Dior, okwenza kube indawo ephelele ukuthenga uma ufuna ukujova ezinye pizzazz ku ikhabethe lakho kule sizini.
Geneva: I Vet 'Isitolo
Geneva kuyinto ngiyabonga iphupho idolobha kwisethingi eliyingqayizivele futhi umbono omangalisayo Mont-Blanc. Intaba ephakeme kunazo zonke e-Europe. I emaphandleni, indawo ephelele imisebenzi yangaphandle, kuyinto imizuzu embalwa nje kude nomuzi. Geneva is the best starting point to visit the rest of Switzerland sibonga enhle kakhulu umphakathi uxhumano ezokuthutha ngesitimela.
Ungahle ucabange .... Yilokho ulwazi enhle nabo bonke, kodwa baphi izingubo at, intombazane?! ngiyazi, Geneva angeke eyaziwa ngokuthi idolobha engongi, kodwa yingakho uthola nathi. Ukuze ahlunge amagugu afihliwe ngoba uthanda lo. Ukuze imali abahambi Friend ufuna kuze umdlalo wabo vintage ngaphandle kokuthi ukudayisa umphefumulo wabo, I Vet 'Isitolo ekhatsi Geneva kuyindlela phambili!
Ingxenye ye-Swiss Red Cross, esitolo vintage is imfashini kakhudlwana kwayiwa kuka esiza abantulayo esitolo yayo nozakwabo. It kuphela ethengisa ngesandla abelethwe izingubo Retro kusuka brand yisakhiwo sodumo ezifana Givenchy futhi Celine. Ngakho, ngabe uku umthandi lesibili ngesandla imfashini zokuziphatha, ngezizathu zombusazwe noma kwezomnotho, Hlola I Vet 'Isitolo. Abagcini ukuqhutshwa besiya ekusizeni abantu abadinga usizo kodwa futhi okunye Wamukelekile amanani isibhakabhaka-eziphakemeyo zomuzi Swiss!
ILyon ukuya ithikithi lesitimela eGeneva
IZurich iya eGeneva ithikithi lesitimela
I-Paris iya eGeneva ithikithi lesitimela
UBern esiya eGeneva ithikithi lesitimela
Ulungele lezingubo entsha snazzy? Londoloza imali yakho ukuze izingubo futhi incwadi kanye SaveATrain. Ayikho kufihlwe nezinkokhelo uthola ukubhuka kalula! 😎
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-vintage-stores-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / nl ku / fr noma / pl nokuningi izilimi.